ဆေးထိုးစက်, ပလတ်စတစ်ဆေးထိုးမှို - Yingtu
၁. မြင့်တင်သောဆီထည့်သည့်စက်ပတ္တာနှင့်ရွေ့လျားနေသောအစိတ်အပိုင်းများမှာဆီဖြစ်သည်။ ဆီနံများအသုံးပြုခြင်းကိုလျှော့ချသည်၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချပြီးရေနံကိုလျှော့ချနိုင်သည်၊ စက်၏သန့်ရှင်းမှုကိုတိုးတက်စေသည်။
2.Synchronous ဟိုက်ဒရောလစ်တိကျမှိုချိန်ညှိယန္တရားဟိုက်ဒရောလစ်မော်တာ, ဗဟို positioning ကိုဂီယာမှိုညှိညှိစနစ်, ဒါကြောင့်မှိုညှိစနစ်ကပိုပြီးပြီးပြည့်စုံသော 3. ညှိညှိခြင်းမရှိဘဲအတွင်းပိုင်းလုံခြုံရေးလုံခြုံရေးညှိနှိုင်းမှုမပါဘဲဝှက်ထားသောလုံခြုံမှုဘားအမျိုးအစားအသစ်, ထိတွေ့မှုလျော့နည်း, ပိုမိုမြင့်မားသောဘေးကင်းလုံခြုံမှု 4.Adjustable tw ...
"Yingtu Machinery Manufacturing" သည် ၂၁ ရာစုတွင်တရုတ်၏တိကျသောဆေးထိုးခြင်းပုံသွင်းစက်တွင်ထိပ်တန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ကတိကဝတ်ပြုထားသည်
Ningbo Yingtu Machinery Manufacturing Co. , Ltd. East China Sea-Ningbo တွင်တည်ရှိသောကုမ္ပဏီသည် ၁၀ နှစ်ကျော်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ၏စက်၏အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံ၊ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။ ပြည်တွင်းစက်ယန္တရားစက်ရုံ၊ ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့၏ပါမောက္ခသည်အတိုင်ပင်ခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်၊ သိသာထင်ရှားသည့်နည်းပညာဆိုင်ရာအားသာချက်နှင့်ပလပ်စတစ်လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏အားသာချက်ရှိသည်။ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ချိန်မှ စ၍ ဖောက်သည်များ၏ ၀ ယ်လိုအားကိုအဓိကကျသည်။
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. Hot Products ၊ Sitemap ၊ AMP Mobile
ဟိုက်ဒရောလစ်ဆေးထိုးသွန်းစက်၊ စွမ်းအင်ချွေတာဆေးထိုးစက် ၊ Servo Motor Injection မှိုစက် ၊ ရော်ဘာထိုးဆေးမှုတ်စက် ၊ Plastic Injection Machines ၊ Injection ၊